ကိုယ်ပိုင်၀င်ငွေလေးနဲ့ အဖွားဖြစ်သူအတွက် (၁)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အလှူလေး‌ေပးခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင် – Cele Zone
ကိုယ်ပိုင်၀င်ငွေလေးနဲ့ အဖွားဖြစ်သူအတွက် (၁)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အလှူလေး‌ေပးခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်
October 20, 2019 March 12, 2020 - by bagyiaung
လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး‌တော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ လူငယ် မင်းသားချောမိုးအောင်ရင်ဟာ တိမ်းပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားဖြစ်သူရဲ့ (၁)နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အလှူကိုမိသားစုနဲ့ အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတည်းက အဖွားချစ်သားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအလှူလေးမှာ သူ့ရဲ့ချွေးနဲစာလေးတွေနဲ့ ပါ၀င်ကာလှူဒါန်းကုသိုလ်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုးအောင်ရင်ဟာ အနုပညာလောကထဲတစ်ကျော့ပြန်၀င်ရောက်လာပြီးနောက်မှာ အရင်ကထက်ပိုပြီးလည်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလာခဲ့ပြီးတော့ ဘာသာရေး အလုပ်တွေအလှူအတန်းတွေကိုလည်း ပိုမိုပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်နော်။ အရင်ကတည်းက အလှူအတန်းတွေဆိုရင် မအားတဲ့ကြားကနေအချိန်လုပြီးတော့ လူအားနဲ့ရော အလှူဒါနနဲ့ပါ တတ်အားသရွေ့ ပါ၀င်ကုသိုလ်ယူတတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။
အဖွားရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ တော့ မိုးအောင်ရင်ဟာ အိမ်မှာပဲ သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ်ကာ ဆွမ်းကပ်ရင်းနဲ့ ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းဟောကြားတဲ့တရားတော်တော်တွေ တစ်မိသားစုလုံးဆည်းကပ်နာယူကာ ဘာသာရေးအတူတူ လုပ်နေခဲ့ကြတာကလည်း ကြည်နူးဖွယ်ရာပါပဲနော်။ ကဲ… အဖွားရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အလှူမှာ စိတ်နှစ်ကိုယ်နှစ်နဲ့ ကုသိုလ်ယူနေခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်တို့ရဲ့ အလှူမှတ်တမ်းပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တို့အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
Source : Moe Aung Yin
ကိုယ္ပိုင္၀င္ေငြေလးနဲ႔ အဖြားျဖစ္သူအတြက္ (၁)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အလႉေလး‌ေပးခဲ့တဲ့ မိုးေအာင္ရင္
လက္ရွိမွာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိၿပီး‌ေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ လူငယ္ မင္းသားေခ်ာမိုးေအာင္ရင္ဟာ တိမ္းပါးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ အဖြားျဖစ္သူရဲ႕ (၁)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အလႉကိုမိသားစုနဲ႔ အတူတူျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အရင္ကတည္းက အဖြားခ်စ္သားတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအလႉေလးမွာ သူ႔ရဲ႕ေခြၽးနဲစာေလးေတြနဲ႔ ပါ၀င္ကာလႉဒါန္းကုသိုလ္ယူခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
မိုးေအာင္ရင္ဟာ အႏုပညာေလာကထဲတစ္ေက်ာ့ျပန္၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္မွာ အရင္ကထက္ပိုၿပီးလည္း အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစားလာခဲ့ၿပီးေတာ့ ဘာသာေရး အလုပ္ေတြအလႉအတန္းေတြကိုလည္း ပိုမိုျပဳလုပ္လာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ အရင္ကတည္းက အလႉအတန္းေတြဆိုရင္ မအားတဲ့ၾကားကေနအခ်ိန္လုၿပီးေတာ့ လူအားနဲ႔ေရာ အလႉဒါနနဲ႔ပါ တတ္အားသေ႐ြ႕ ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူတတ္သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါေသးတယ္။
အဖြားရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ေတာ့ မိုးေအာင္ရင္ဟာ အိမ္မွာပဲ သံဃာေတာ္ေတြကို ပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္းကပ္ရင္းနဲ႔ ခ်စ္ရတဲ့မိသားစုနဲ႔အတူ ကုသိုလ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေဟာၾကားတဲ့တရားေတာ္ေတာ္ေတြ တစ္မိသားစုလုံးဆည္းကပ္နာယူကာ ဘာသာေရးအတူတူ လုပ္ေနခဲ့ၾကတာကလည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာပါပဲေနာ္။ ကဲ… အဖြားရဲ႕တစ္ႏွစ္ျပည့္အလႉမွာ စိတ္ႏွစ္ကိုယ္ႏွစ္နဲ႔ ကုသိုလ္ယူေနခဲ့တဲ့ မိုးေအာင္ရင္တို႔ရဲ႕ အလႉမွတ္တမ္းပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္….
အမိုက်စားပြင်ဆင်ထားတဲ့ New York တိုက်ခန်းလေးရဲ့ ပြင်ဆင်ထားပုံကို မျှဝေလိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
တစ်ပတ်အတွင်းမှာတင် ပရိသတ်အားပေးနာဆင်မှုအများဆုံးနဲ့ Joox ရဲ့ နံပါတ် (၁)နေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ မိစန္ဒီတို့ရဲ့ သီချင်း
ရှုတင်ရိုက်ကွင်းအထိ ကော်ဖီကားပို့ပေးတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေကြောင့် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေခဲ့တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
Previous Article သမီးလေးကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတာကြောင့် အရမ်းကိုနုပြီးချောလွန်းနေတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
Next Article ချစ်သက်လေးရဲ့ အိုက်တင်တွေအပြည့်နဲ့ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်ပြထားတဲ့ ခြူးလေးရဲ့Tik Tok
View all posts by bagyiaung →